Ethiopia: Xarunta Addi Ababa ee Ethiopia oo Noqotay Magalada Sadaxaad ee Qaramada Midoobay | KILIL5
October 30, 2014 Filed under Business, Links, News, Social Media, special topics Posted by admin
Xarunta Xafiiska arrimaha dhaqaalaha u qaabilsan QM (UN-ECA)
ADDIS ABABA – Caasimada Itoobiya, Addis, ayaa noqotay magaalada 3-aad ee xaafisyada ugu badan ku leedahay Qaramada Midoobay. Waxaa ka horeeya magaalooyinka New York iyo Geneva oo ku kala jira kow iyo laba.
Xafiiska arrimaha dhaqaalaha u qaabilsan QM (UN-ECA) ayaa maanta loo furay xaruun cusub oo dhismaheedu qaatay muddo 4 sano ah. Xaruunta ayaa saldhig u noqon doonta dhamaan hay’adaha QM ee fadhigoodu yahay Itoobiya.
Waxaa dhismaha cusub xadhiga ka jaray ra’isulwasaaraha Itoobiya iyo xoghayaha QM oo booqasho ku maraya dalkaas.
Addis Ababa ayaa fadhi u ah ururo badan oo caalami ah oo uu ku jiro ururka Midowga Afrika.